Ikate yomculi, ikhaya leholide yothando kunye nesauna
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBrigitte
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uBrigitte iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Iholide ye-nostalgia ecocekileyo-kwindlu yomzobi ene-300 yeemitha zesikwere sendawo yokuhlala kunye ne-sauna yangaphakathi.
"Shiya ubomi bemihla ngemihla ngasemva" kwintlambo entle yase-Elbe. Kwilali ye-12 yendlu yaseBreetz enentuthuzelo yanamhlanje. Amagumbi akhanyayo, amagumbi okuhlambela anamhlanje, amakhitshi apheleleyo, ukufudumeza, igumbi lokuphumla elinesauna, i-whirlpool eshushu kunye nezitulo zomgangatho. Ewe kunjalo ngeTV kunye neWiFi, kunye nomlambo okufutshane onejethi yokuqubha, amaphenyane anokuqeshwa ukhenketho eLöcknitz.
I-Elbe Valley entle, enelanga enelanga ibonelela kakhulu malunga nokhenketho oluthambileyo: ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela intaba, izinto ezibonwayo, izixeko ezintle kunye nenkangeleko yomhlaba eninzi. Amachibi akufutshane kunye ne-Locknitz - umlambo othambileyo - ngokuchasene ngokuthe ngqo alungele ukuloba, ukuqubha, ukukhwela iphenyane kunye nokuhamba ngesikhephe.
I-Breetz enezilalini ezili-12 inabemi abangama-23 kuphela. Kukho enye into enkulu, iKulturhof Breetz. Ngabantu abaninzi le iya kuba yinto efanelekileyo. Kukwakho negumbi lesemina elincinane elikwalungele imitshato.
Indawo yokutyela yezinto ezintle nezindala ibonelela ngamaqebengwana abhakwe ekhaya, i-ayisikrimu kunye nemenyu encinci yesidlo sasemini ngexesha lonyaka. Kumaqela nawo aphelelwe lixesha. Oku kubandakanya indawo yenkunkuma apho unokufumana enye okanye enye yekhaya.
Sikwindawo kwaye siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso onokuthi ube nazo. Iikhosi zokupeyinta i-Watercolor zinokwenzeka kwigalari echasene ngqo. Amaxabiso kunye nemihla ngesicelo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lenzen (Elbe)